Qaybtii labo iyo tobnaad.
Dhulka oo qabqablayaasha baraya sida shacabka loo soo jiito
Waxaa la oranjiray ha waydiin inta naas ee geelu leeyahay dhalinyarada reer Xamarka maxaa yeelay kan ugu bataa waa mid arka awr tacsi ama siyaaro loo qalayo ama awr lagu iibinayo suuqa geela, badanaa Soomaalidu ma jeclayn inay gadaan geela dhedig khaasatan haddii la qalayo. Haddaan rabo inaan hadda usheego tirada naasaha geela Reer Banaadirka Soomaaliya jooga waxaa igu filan inaan dhaho waa inta dhuumood oo uu shilkuhu leeyahay hana ka filan hadda inay ku dhahaan bistoolad camal waaye maxaa yeelay iyagiibaa dhulkoodii laga cayrshay oo qaarkood baadiye iyo gobollo aysan waligood arag la geeyey oo waxay udhowdahay inay arkeen geel dhalaya iskaa naasihiisee. Dhulku bal qabqablayaasha su’aal ha dhexdhigo.
Dhul: qabqablayaaloow yaa yaqaan shuuro/shuuraa?
Qabqablayaal: soow ma ahan galayda la shiiday/soor/leefoo liq!
Waxay ixasuusinaysaa sheeko uu Shiikh la yiraahdo Ibnu Jowziyah uu ka sheegay qolayaha walimada ka qaraabta/sab agjoogayaal mar midkood la waydiiyey waxa uu Qur’aanka ka yaqaanay. Wuxuu yiri Qur’aankaan aqaanay waa la i ilowsiiyey aayaddan maahee “aatinaa qadaa’anaa laqad laqiinaa min safarinaa haadaa nasabaa” waa aayadda ku jirta Suurat Al-Kahf ee Nabi Muuse khaadimkiisii kulahaa noo keen qadadeena, waxaan kala kulanay safarkeena dale.
Anigu lama yaabani qabqablayaasha warkooda maxaa yeelay “nin walba ceesaantiisuu ceel gaystaa, nin meeli ucaddahay meeli ka madow. Nimanku waa niman soori/dhuuni/hunguri qaaday marka hadday shuuro/shuuraa soor ku sheegeen waxay yaqaaneen bay sheegeen waana ugu cududaaraynaa.
Dhulku imtixaan buu uga danlahaa wuuna yaqaan caqligooda iyaga iyo wixii caqli xumada uga horeeyey. Dhulku wuxuu islahaa bal midkood waxgarad ah haka soo dhexbaxo oo isku xira cinwaanka laga hadlayey oo ahaa sida shicibka loo soo jiito iyo shuurada oo la rabay in loo fahmo in laga wado qaabkaas diintu banaysay ee dadku ushowro oo arrimahooda si wadajir ah uga hadlaan oo dadka caqliga badani ay arrimaha galaan. Dhulku wuxuu qabqablayaasha tusaalaynayaa quruumo hore oo qaarkood mulxidiin ahaa, qaarna mushrikiin ahaa qaarna ay mursaliin yihiin oo uu ku jiro Nabi Muxamed (SCW) anagoo ku soo khatimayna Nabi Muxamed (SCW) oo faa’iido badan ku jirto inaan saa yeelo. Waxaan dadweynaha ka codsanayaa inay daqiiqado dulqaataan oo ay si fiican u akhriyaan iyagaa markaa ogaanaya sida ay mulxidiintii ama mushrikiintii nooga horeeyeen waxyaalaha qaarkood.
Haweenayda Qur’aanka lagu xusay ee dadku ay Balqiisa ku sheegaan markay aragtay warqad uu Nabi Sulaymaan uu hud-hudkii ugu soo dhiibay wuxuu damiirkeedu siiyey markay akhrisay in warqadani ay tahay warqad wanaagsan waxayna wanaagii ka xustay “BISMILLAAHIR- RAXMAANIR- RAXIIM”. Mushrikad baa Bisinka iyo wixii la socday Kariim ku sheegtay annagoo muslimiin ahna Bisinka iyo Assalaamu calaykum waa la isku caayaa?!!!!!!!!!!!!!! Talaabadii kale oo ay qaaday waxay ahayd waxay u bandhigtay arrintii dadkeedii iyadoo awood u lahayd inay qaraarkay rabto qaadan karto laakiin waxay taqaanay sida dadka loola xaalo. Markay arrintii ubandhigtay waxaa la siiyey in ay waxay rabto samayso. Iyaduna ma dayacin dadkeedii oo way dadaashay oo markii ay baaritaan iyo balanqaad adduunyo ay usamaysay Nabi Sulaymaan oo ka diiday inuu hadiyad ka qaato ayey aragtay in arrintiisu tahay xaq kadibna nafteedii iyo dadkeedii badbaadisay. Shuuradaa maanta Gaalo iyo xukaamta muslimiinta midna laguma hayo.
Fircoon: waa qofkii Ilaahnimada sheegtay oo Quraanku xusay inuu qoomkiisa ku lahaa “Ilaah aan aniga ahayn idiin ma ogi” markalana wuxuu yiri “waxaan ahay rabbiigiinii sareeyey”. Waxaa yaab leh ninka qooqa intaas le’eg gaaray aan eegno sida uu wax u maaraynjiray. Waxaad moodaysaa inuu qaabka uu dhisay maamulka uu kaga horeeyo kuwo badan oo Islaamka horbooda bal aan eegno qaybo arrintaas ka mid ah. Aayadda 20-naad ee Suurat Al-Qasas waxaad arkaysaa markuu Nabi Muuse si aan kas ahayn udilay ninkii qolada Fircoon waatii nin kale oo muslix ahi uu Nabi Muuse u sheegay in madaxyo weyntii Fircoon ay qaraar ku gaareen in Muuse la dilo. Waxaad arkaysaa in arrinta uuna Fircoon oo kaliya gaarin ee ay qolyaha uu soo dhowaysto ay meesha joogaan iyagana hadalku kasoo fulay. Waa qaabka ay dimuqraadiyadu isticmaasho sida baarlamaanka ama diktatoorada caqliga badan maxaa yeelay madaxdaas waxay isu qaataan in la sharfay oo iyagu ay xukun rideen.
Haddaad milicsato Suurat Ash-Shucaraa’ Aayadaheeda 18 iyo 19 waxaad arkaysaa sida uu Fircoon rabay inuu ub-beer dulucsado Muuse isagoo leh miyaanaan kugu barbaarin dhexdayada adoo yar oo aadan ku nagaanin dhexdayada cimrigaaga sanooyin ka mid ah. Oo aad fashay waxaad fashay adoo diidan (samofalkii). Fiiri siyaasada Fircoon. Waa arrinta ay Maraykanku ku handadaan Faransiiska, Ingiriiska iyo Yurubta kale iyagoo leh soow dagaalkii labaad idin kama soo gaarin idinkoo Jarmalku idin qabsan rabo si loogu oggolaado inuu wuxuu rabo adduunka ka sameeyo. Waxaa intaa dheer sida wadatashigu ka muuqdo oo uu hadalka ugu soo bandhigayey madaxyo weyntiisii. Isla Suurat Ash-Shucaraa’ Aayadaha 34 & 35 wuxuu ku yiri qolyahaas agtiisa joogay Kani waa sixirroole xeel dheer. Oo doonaya inuu idin ka bixiyo dhulkiina sixirkiisa ee maxaad faraysaan? Iyagii baa hadalkii qaatay oo yiri: dib u dhig arrinta iyo walaalkiis, magaalooyinka u dir dad soo jamciya. Ilaa aayadaha ka dambeeya. Fircoon arrimahaas waa fuliyey. Fiiri isagoo sheegtay Ilaah sida uu ufahmayo waxa danta ugu jirto iyo waxa kale. Mararka qaarkood sida Quraanka ku xussan in madaxyo weynta Fircoon ay Fircoon ku leeyihiin ma Muuse iyo kooxdiisa ayaad uga tagaysaa inay dhulka fasahaadiyaan, cibaadadaadana ka tagaan.
Waxaa intaas dheer in Fircoon isagoo darajadaa sheegtay uu muujiyey dulqaad kadib markuu Muuse la dooday oo waa iyada aan Quraanka ku aragnay isagoo leh Muusoow waa kuma Rabbigaa? Ka waran quruumihii hore IWM. Waxaa aad iiga yaabisay markii Fircoon iyo qoomkiisa ay dhibtii iyo abaarihii ku dhaceen waxay yaqaaneen meesha xalku ku jiro oo waxay aadeen Muuse iyagoo leh Ilaahay noo bari hadduu cadaabka naga saarana waan ku rumaynaynaa, reer Banuu Israa’iilna waan kugu darin. Fiiri Aayadda 134-aad ee Suurat Al-Acraaf. Fircoon sidiisoo kale Mushrikiintu makray badda fuulaan oo dabayli ku kacdo Ilaah kaliya ayey u carari jireen. Walaalayaal Soomaalida boqqolaal kun oo qof ayaa dhintay maalin kastana carruur iyo cirroole ayaa xabbadi la tagtaa marka haddii mushrikiintii iyo Fircoon makray sigtaan saas Ilaah u baryaan maxaa annagoo muslim ah noogu wacan inaan reer Galbeed iyo gaalo u qayshano. Mid kasta oo qabqable ahna markuu hadlo uu waxaas ugu hadlaa oo waliba annagoo xaaladaa ku jirna uu ugu dhawaaqaa in Islaamka lasii dulleeyo, amxaaradana walaal iyo wadeey/saaxiib loogu yeero lagalana tashado arrinta Soomaaliya si ay waddankeena nabad ugu soo dabbaalaan!
Reer Galbeedku waxay Fircoon ka barteen arrimahaas oo waad aragteen Fircoon wuxuu gumaysan jiray reer Banuu Israa’iil ee dadkiisa ma gumaysan jirin. Haddaad tusaale rabto akhri Quraanka isla Suuradii Ash-Shucaraa’ waatii Nabi Muuse kusoo baxay mid qoomkii Fircoon ah oo raranaya mid Banuu Israa’iil ah. Reer Galbeedka hadda in dadkoodu cunto, shidaal, daawo waayo way dhibtaa sidoo kale inay ku mudaharaadaan way dhibsadaan laakiin in ay Muslimiinta iyo Carabta ay cabburiyaan oo ay u sameeyaan boqorro inkaar qaba oo ay kheyraadkooda dhacaan dhib uma leh. Marka sheekadaan waxaa uga horeeyey Fircoon waana mabada’a dad badan oo muslimiin ahi la dhacsanyihiin. Markaan Quraanka iyo Sunnada jaleecdid ma arkaysid wax dhib ah oo ay dadkii Fircoon ka dhashay ku qabeen Fircoon waana la ogaa markii ay Muuse iyo reer Banuu Israa’iil ay cayrsadeen inta ciidan oo Fircoon oo soo baxday iyo quwaday lahaayeen. Ilaahay ayaa baddaas ku ciqaabay ee cinqilaab ay dadkiisii ku sameeyeen kuma dhicin maxaa yeelay qoomkiisa wuu naasnuujiyey sida reer Galbeedku yeeleen. Laakiin haddaad akhriso waxa ay gaaladu ka sheegaan sheekooyinkii Fircoon waxaa laga yaabaa inay xussaan cinqilaab iyo waxyaalo la mid ah oo ay damceen laakiin Nasuusta ayaa qissooyin noogu filan. Laakiin qab-qablayaashu waxay rabaan inay na rartaan oo diinteena caayaan, Zenawi iyo shisheeyana ay u shaqeeyaan. Waxaa dhici karta in la arko amxaar qof Soomaaliya ku xiraya isla Soomaaliya ama sidii labadii nin ee Boosaaso joogay ee Itoobiya loo dhoofiyey ama waxa ay Baydhabo ka samayn jireen. Waxaan shakki ku jirin in Fircoon uu yaqaanay maaraynta iyo maamulka oo uu kala yaqaanay dadkiisa iyo qoomkii Nabi Muuse.
Bal Qisadii Hiraqle iyo Abuu Sufyaan ka raadi Saxiixul Bukhaari. Sida uu Hiriqle u qiray sifooyinka Nabiga iyo muslimiinta iyo sida Abuu Sufyaan uu uga cararay beenta. Haddaad akhrisid maqaalo badan oo ay qoraan dadka qabqablayaasha taageera ama iyaga laftoodu ay diintooda, dalkooda iyo dadkooda uga beensheegaan iyagoo is leh wax ku hela ama diin nacayb uga dan leh. Hiriqle si shuuro ah buu dadkiisii iyo Abuu Sufyaanba u dhagaystay markii qolyaha kaniisadu kasoo horjeesteen oo ay ooyeen ma layn mana ciqaabin ee isagaa xukunkiisii u turtay.
Aan usoo galno Sayidkii Binu Aadam (SCW) waa Nabi Muxamed (SCW). Waxay ahayd in Nabiga aan ku bilaabo laakiin taariikh ahaan baan u rabaa iyo anoo jecel in xaqu uu tirtiro dulmiga marka waa in xaqu dambeeyaa waxaana fiican inuu xaqo nagaado oo uu sugnaado. Nabi Muxamed (SCW) waagii Makka asxaabtiisii tirada yarayd waa la tashan jiray. Waxaad arkaysaa markii Abuu Darr Al-Qifaari uu muslimay, buu yiri Kacbadaan tagin oo aan qiran Shahaadatayn-ka . Nabigu (SCW) wuxuu kula tashay in uu iska daayo oo carrigiisii ku noqdo oo dhibkaan uusan dhabarka u dhigan. Abuu Darr oo ahaa saxaabi ad-adag ayaa goostay inuu hortooda ka qirto waxaana halkaas ka soo gaaray dhibaato kadib markii odayaashii Quraysh ay isagu tageen (ku goobteen).
Dagaalkii Badar markii labadii ciidan isa soo horfariisteen waatii Nabigu (SCW) uu ku yiri asxaabtiisa (Ashiiruu callayya ayuhan-naas) oo ah tala keena isagoo u dan leh reer Madiina ilayn reer Madiina waxay Nabiga (SCW) kula baayacoodeen in haddii la soo weeraro ay sida naftooda iyo ehelkooda oo kale ay Nabiga u difaacayaan waa haddii Madiina lagu soo weeraro laakiin hadda Nabigu Madiina waa kasoo baxay oo waxay soo aadeen Safar inay qabtaan, dagaal ma soo aadin. Nabigu markan waa ogyahay in meesha dagaal ka soo socdo laakiin Ansaar meesha hadal baa uga furan. Arrimahaan dad baa ku sheegi lahaa dimuqraadiyad. Ilaah baan ku dhaartee markaan laymankan qorayey waxaa damcay inaan istaajiyo oo cabbaar ka fekero shuurada Nabiga (SCW). Nasiib wanaag Ansaar waxay dhaheen Nabigii (SCW) meeshaad rabtid noo wad, ma jirto cid Ansaar ah oo kaa haraysa. Waxaa taa dheer markii Nabigu ciidankii dagaal u diyaariyey oo ku furay meel xoogaa ceelkii ka durugsan ayaa nin saxaabi ahi yiri Nabi Alloow tani ma Waxyi baa mise waa xeelad dagaal. Nabigu wuxuu yiri waa xeel dagaal. Saxaabigii wuxuu yiri waxaa fiican inaan ceelka tagno oo aan dar ka samaysano oo aan hortiisa istaagno markaan oonno aan ka cabno markii cadowgu harraadaana aan u diidno. Nabigu (SCW) waa qaatay caqligaas. Allaahu Akbar.
Dagaalkii Uxud Nabigu (SCW) wuxuu rabay in ay Qurayshi Madiino soo gasho oo asxaabtu ay guryahooda hortooda ku dagaalamaan waana arrinta fiicnayd laakiin dhalinyaro yar yar oo dagaalkii Badar uu dhaafay baa Nabiga dedejiyey inkastoo markii dambe ay dhaheen Nabi Alloow waan kusoo dedejinay ee na celi. Nabigu wuxuu yiri mar haddii aan qalabka dagaalka gashanay noqosho ma jirto. Guuldarrada Uxud arrintaas waxaa kasii darnayd tii saxaabadii buurta ka soo degtay. Ilaahna wuxuu Nabiga u sheegay in uu la sii tashado Asxaabtiisa (Washaawirhum fil amri). Lama oran way kusoo dedejiyeen ee mar dambe ha waraysan.
Dagaalkii Khandaq/Al-Axzaab waatii sidoo kale la yiraahdo Salmaan Faaris ayaa soo jeediyey in dhufays la qoto maxaa yeelay gaalada intaas tiro le’eg looma hayo ciidan hor istaaga oo magaalada ka difaaca. Nabigu (SCW) ma oran nin qariib ah fikradiis qaadan mayno laakiin waxaa caadi u ahayd in wixii caqli gal ah uu ka qaato dadkiisa.
Qabqalbayaasha waaan kula talin lahaa inay ay arkaan sidii Nabi Muxamed (SCW) uu dadkiisa ula tashan jiray sidoo kale Fircoonkaas aan aragnay isna u yaqaanay sida loo tashado dadkiisa iyo waxgaradkiisa. Carabtu waagii hore waxay oranjireen ninkii madaxyo weyn ka dhigta dad caqli xun wuxuu la mid yahay qof biyo maquufay/quusay. Haddaad biyo dhex quustid neeftaa kugu dhegaysa oo ciriiri baad dareemaysaa. Marka haddaad dad caqli xun soo dhowaysatid sidaas baa ku qabsan haddaadan cidna soo dhawaysana waa dhib kale.
Dadweynuhu sidoo kale waa inay tusaalayaashaas ka faa’iidaystaan. Dadka culumaa’udiinka ah, issimada, dhalinyarada iyo dumarkuba waxaa fiican in ay kaalintooda qaataan. Waa in marka wax khalad ah lagu arko hogaamiye kooxeed aan khalad lagu raacin ee laga qabto oo loo nasteexeeyo maxaa yaalay isaga iyo dadkaba dan baa ugu jirta. Haddii wax walba loo yeelo sida Soomaalida caadada u ah dhib bay leedahay. Yaan la noqon waxa loo yaqaan “yes man”.
Hilter dagaalkii labaad wuxuu samaystay niman jeneraalo ah oo noocaas ah wuu diiday inuu maqlo kuwii aqoonta lahaa. Waxaa la yiraahdaa hadduu maqli lahaa nimankaas oo uu u daynlaha howshooda in maanta taariikhdu si kale isu qori lahayd. Wuxuu sameeyey waxa maanta qabqablayaashu sameeyaan. Haddii dagaal lagalayo iyagaa dira. Haddii Shiikh la xirayo iyagaa amra. Haddii boono qof loo qorayo iyagaa amra. Haddii qof dhul xaaqe ah la qorayo iyagaa qora. Haddii beeluhu isdagaalaan iyagaa ergada xula. Haddii canshuur la kordhinayo iyagaa kordhiya. Haddii dhul la xadayo iyagaa xada. Haddii dhulka iyo badda Soomaaliya qashin lagu duugayo ama maraakiib kalluumaysi la siinayo iyagaa siiya sidaas iyo si la mid ah. Marka runta yaan laga tagin. Miyeynaan Cali Gambool xassuusan waa isagii Sayidka oo aan hadalka lagu celin sidii la ogayd ula hadlay
Ducaadda: waxaan u sheegayaa ilayn qof Caalima ah waxaan kama suurtoowdee in aysan dadka niyad jabin khaasatan kuwa runta sheegaya. Marar badan waxaad maqlaysaa in markay arkaan qof xaqa suu yahay usheegaya ay dhahaan walaal waxaa la rabaa Qowl layyin ah. Qofkii qowl layyin ah raboow waakan. Muuse markuu lahaa markuu Fircoon yiri Muusoow waxaan kuu malayn mid la sixray. Nabi Muuse isna wuxuu yiri Fircoonoow ana waxaan kuu malayn mid lahalaagi. Ogoow Muuse waa Nabigii Ilaahay ku yiri qowl layyin ah dheh waana Rasuulkii loo diray Fircoon si uu qowlkaas ugu dhaho, marka Nabi Muuse ma khalad buu sameeyey? Xaashaa, Nabi Muuse khalad ma samayn. Sidoo kale qowlu layyin ma ahan hadal jilicsan oo dadka xaqa la dagaalaa ku farxaan bal Nabi Muxamed (SCW) oo qowlu layyin leh aan fiirino. Markii Qurayshi ay Nabiga ku dacwaysay adeerkii Abuu Dhaalib waa tay dhaheen wax walba waan u ogolnahaye wax ha sheegto. Nabigu wuxuu yiri qowl layyin ah oo ahaa ( QUULUU LAA ILAAHA ILLALLAAHU TUFLIXUU) oo ah towxiidkii laakiin Qurayshi waa ka xanaaqeen iyagoo leh ma Ilaahyadii buu Hal Ilaah ka soo reebay. Marka haddii mujrimiintu xaqa ka xanaaqaan micnaheedu ma ahan qowlu layyin lama oran. Waxaan shakki lahayn in xikmad loo baahanyahay. Marka haddii markii Fircoon lahaa Muusoow waxaan kuu malayn mid sixran haddii Muuse dhahi lahaa Fircoonoow waxaan kuu malayn mid waxgarad ah xikmad ma ahaateen.
Gabagabo: Fircoon markii dhibtu ku dhacday wuxuu aaday Nabi Muuse si uu Ilaahay ugu baryo. Anaga oo dhibka nahaystaa uusan jirin dhib ka wayn maxaan Ilaahay u aadi la’nahay? Waxaa kasii daran waxaan aadnay wax uusan Fircoon samayn oo ah Maraykan iyo Amxaaro. Nabi Muuse isagoo nin kamma’/si aan kas ahyn ah ku dilay waa kudhici waayey inuu Fircoon aado oo Ilaahay buu uga cududaartay arrintaas laakiin qabqablayaashu iyagoo kumanaan dilay bay isu qabaan inay yihiin madax oo waliba shacabkii iyo diintiisa ay ku tuhmayaan inay nabadda kasoo horjeedaan iyaguna ay saxsanyihiin.
Lasoco taxanaha haddii Ilaah idmo.